São Tomé na Príncipe nwetara $ 10.7 nde site na Fund Development Africa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Sao Tome na Principe » São Tomé na Príncipe nwetara $ 10.7 nde site na Fund Development Africa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Sao Tome na Principe • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ego mmepe Africa na -enye ego nde $ 10.7 iji kwado ndị SME na ọrụ ugbo na njem nlegharị anya na São Tomé na Príncipe.
Ebumnuche a bụ ịkwalite gburugburu azụmaahịa site na iwepu ihe mgbochi ụfọdụ na-egbochi uto nke ụlọ ọrụ onwe ha na-ebute.
Ọrụ a ga-ewusi ike na ịnweta ahịa na kredit maka obere na obere ụlọ ọrụ (SMEs) site na ọzụzụ mmepe na azụmaahịa.
Obodo a nwere nnukwu ọrụ ugbo, ọrụ, gụnyere njem nlegharị anya na akụ na ụba na -acha anụnụ anụnụ, ngalaba na -anọchite anya ihe karịrị 70% nke ọrụ akụ na ụba.
Ndi Ntuzi nke Ego mmepe Africa (ADF) kwadoro na Wenezde na Abidjan, nyere São Tomé na Príncipe nde US $ 10.7 maka mmejuputa akụkụ nke mbụ nke Zuntámon Initiative, n'ime usoro nke Lusophone Compact.
Ebumnuche a bụ imeziwanye gburugburu azụmaahịa site na iwepu ihe mgbochi ụfọdụ na-egbochi uto nke ụlọ ọrụ onwe. Ọrụ a ga-ewusi ike na ịnweta ahịa na kredit maka obere na obere ụlọ ọrụ (SMEs) site na ọzụzụ mmepe na azụmaahịa. Nke a ga -emecha tụnye ụtụ ha na akụ na ụba na imepụta ọrụ wee wuo akụ na ụba na -agbanwe agbanwe.
Na mgbakwunye na SMEs, oru ngo a ga -erite uru maka ndị ọchụnta ego na ụlọ ọrụ nkwado azụmaahịa dịka Agencylọ Ọrụ Nkwalite Azụmaahịa na Inye Ego, mkpakọrịta azụmaahịa na ndị otu nkwado azụmaahịa, ụlọ ọrụ ego na Central Bank of São Tomé na Príncipe. Mmejuputa oru ngo a ga -ebute mbelata ọnụ ọgụgụ ụbọchị iji dozie esemokwu azụmahịa site na 1,185 ruo ụbọchị 600 site na iwusi ike nke ụlọ mkpezi na usoro ụlọ ikpe azụmahịa, na site na iwusi gburugburu azụmahịa ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ azụmaahịa edebanyere aha.
“Ọrụ a ga -ewulite ikike nke ụlọ ọrụ gọọmentị Sao Tome ka ọ na -akwalite ọnọdụ azụmaahịa maka mmepe nke ụlọ ọrụ onwe. Ọ ga -akwalite ma kpalie ịhazi usoro akụ na ụba na -ezighi ezi iji mepụta ọrụ ka mma, ọkachasị maka ụmụ nwanyị na ndị ntorobịa na -achịkwa ngalaba na -ezighi ezi. " ka Nwada Martha Phiri, Director, Human Capital, Youth and Skills Development (AHHD) kwuru.
Atumatu Zuntámon ga -elekwasị anya na ntinye aka ya na ngwa ahịa nke ụmụ nwanyị na ndị ntorobịa na -etinye aka na ya, yana ngwaahịa mbupụ nwere nnukwu uto dị ka koko, aki oyibo na ngwaahịa ịkọ ahịhịa. Ihe a na-elekwasị anya na ngwaahịa na ọrụ ndị a kwekọrọ na atụmatụ atụmatụ mgbake akụ na ụba COVID-19 nke gọọmentị São Tomé na Príncipe, nke na-ebute nkwado maka azụmaahịa metụtara ọrịa yana mgbake na ụlọ ọrụ ndị dị mkpa dị ka ọrụ ugbo, ịkụ azụ, njem nleta na ile ọbịa.
“Mgbe ejiri nkwado nkwado mmefu ego nke akụkọ ihe mere eme kwado nzaghachi COVID na 2020, Banklọ akụ ahụ nọ ugbu a na mmalite nke mgbake ọrịa na São Tomé na Príncipe site na ụzọ ọhụrụ nke na-aza ihe ịma aka dị iche iche nke ụlọ ọrụ nzuzo chere ihu na obere. akụ akụ na ụba, ”Maazị Toigo, onye njikwa akụ nke ụlọ akụ na São Tomé na Príncipe kwuru.
Ihe oru ngo a dabara n'usoro ọrụ ụlọ akụ maka atụmatụ ndị ntorobịa maka Africa wee zaa ebumnuche nke Lusophone Compact site n'ịkwalite mmepe nke ụlọ ọrụ nkeonwe yana nke ga-adigide, ebe ọ na-enye aka na atụmatụ mmepe obodo nkeonwe 2015-2024.